शीर्ष ट्रेन्डहरू, FDCI X LFW 2021 दिन १ बाट हाइलाइटहरू - फेशन समाचार
शीर्ष ट्रेन्डहरू, FDCI X LFW 2021 दिन १ बाट हाइलाइटहरू
LFWx FDCI को पहिलो दिनबाट सबै कार्यहरू समात्नुहोस्! # फेशन #LFW #FDCI
एक बर्ष लामो सुस्त अवधि पछि, महामारीको लागि धन्यवाद छैन, फेशन उद्योग अन्ततः सबै शैली नोट मा एक वापसी उच्च लात मार्यो। यस बर्षको फेशन एक्स्ट्राग्यान्जाका लागि, लेक्मे फेशन वीक (LFW) र भारतको फैशन डिजाइन काउन्सिल (FDCI) पाँच दिनको चक्करमा इतिहासमा पहिलो पटक आए।
फिजिटल एक्स्ट्राभागान्जाको दिन १ ले उद्योगको केही सब भन्दा प्रतिभाशाली डिजाइनरहरू द्वारा डिजाइनर संग्रहको असंख्य प्रदर्शन गरे। पंकज र निधिको एक्लेक्टिक संग्रहबाट शान्तनु र निखिलको काल्पनिक सिल्हूटहरू, र पायल सिंघलको जीवन भन्दा ठूलो आउटफिटहरू अर्पिता मेहताको विलक्षण शैलीहरू केहि ठूला कार्यक्रमहरू थिए जसमा सबैको ध्यान एक दिनको कुरा हो। र हामीले फेसन रनवेमा केहि नयाँ शैलीहरू देख्यौं जुन अन्तमा केही दिनको लागि अनक्युप छाडिएको थियो।
सपना जस्ता फ्याट्यासी सेट देखि टेक्नोलोजिकल प्रगतिहरूमा, फेशन हप्ताको पहिलो दिन हामीलाई सबैले उडायो र हामीलाई एक पटक जीवनभरको अनुभवमा दिए। विचित्र शैलीहरूको विस्तृत दायरा र रंगहरूको अपारता दर्शनको केही कम थिएन किनभने असाधारण संग्रहमा लुगा लगाएका आकर्षक मोडलहरू, र्‍याम्पमा उनीहरूको बाटो बनाउँथे, प्रत्येकले हामीलाई जीवनमा डिजाइन ल्याउने प्रयास र कल्पनाको अन्तर्दृष्टि दिन्छ।
यहाँ प्रतिभाशाली डिजाइनरहरूको एक सेट अप छ जुन फेशन हप्ताको पहिलो दिन तिनीहरूको अविस्मरणीय संग्रहहरू प्रदर्शन गर्‍यो।
जनरल नेक्स्ट डिजाईनरहरू - वजाहत रूथ र राहुल दास गुप्ता
एलएफडब्ल्यू x एफडीसीआई कार्यक्रमको पहिलो दिन डिजाइनरहरूको सामान्य नेक्स्ट श्रेणीको साथ शुरू भयो जुन उद्योगमा नवीनताको एक तरंग ल्याउन जिम्मेवार छ। यो मञ्च युवा र प्रतिभाशाली डिजाइनरहरूलाई उनीहरूको सीप वृद्धि गर्न र फेसन उद्योगमा केन्द्र चरण लिन अवसर प्रदान गर्नका लागि परिचित छ। यस वर्ष हामी दुई उदीयमान लेबलहरू - रफुघरलाई वाजाहात रदर र लेबल राहुल दासगुप्ताले परिचय गरेका थियौं। वाजाहातको संग्रह, 'माजी', कश्मीरमा उसको गृहनगरबाट प्रेरणा पाउँछ। उनले एक रेखा प्रस्तुत गरे जसले परम्परागत फेरेन सिल्हूट्सलाई अगाडि ल्याए र संग्रहलाई ब्लक प्रिन्ट प्रविधिको प्रयोगको साथ समकालीन मोड़ दिए। राहुलको लेबलले गत वर्ष लकडाउनको क्रममा यसको स्थापना भएको देख्यो। उसको मेन्सवेयर लाइनले समुद्रको शान्तिको प्रेरणा दिन्छ। शिबोरीको परम्परागत शिल्प तकनीकबाट प्रभावित कपडामा कपडाहरू र कपडामा गहिरो रिबिंगको प्रभाव, मेन्सवेयरको लागि अनौंठो अपग्रेड दिन्छ।
ब्लोनीको अक्षत बन्सलले लकमे फेशन वीकको दिनको सबैभन्दा भयंकर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्‍यो। उसले टेक्सटाइल ब्लेन्डिंग गर्ने प्रविधिको प्रयोग गर्दछ जुन स्थिरतालाई नयाँ रूप दिन्छ। संग्रह को अनौंठो अंश यो हो कि यो एक विशेष लि gender्गमा सीमित छैन र लि nor्ग आदर्श तोड्ने र लि fluid्ग फ्लुइड कपडा उत्पादन गर्न पूरा गर्दछ। टेक्नोलोजीसँग भविष्यको मिश्रण यस स collection्ग्रहलाई परिभाषित गर्ने उत्तम तरिका हुन सक्छ कि नयाँ डिजाइन प्रविधिको लागि हाइब्रिड टेक्सटाइल बनाउन डिजाइनरले उन्नत प्रविधि प्रयोग गर्दछ। कपडा समुद्री प्लास्टिकको फोहर कपडाका रूपमा प्रस्तुत गरियो र यसलाई नयाँ जीवन दिन पुन: प्रयोग गरियो। लि neutral्ग तटस्थ सिल्हूट्सको साथ चमकदार कपडाहरूले थप लि bl्ग मानदण्डहरूलाई धमिल्याउँछ र उनको बोल्ड स to्ग्रहलाई शक्ति दिन्छ।
अनुहारको कपाल विकासको लागि घरेलु उपचार
टेक्नोलोजी र शैलीको उत्तम काल्पनिक संयोजन अन्तमा आइपुगेको छ र हामी यसको लागि हिडमा थियौं! अर्पिता मेहताको नयाँ संग्रह 'रिफ्लेक्सन' ग्रीष्मकालीन समुद्री छालहरूको बिरूद्ध सेट गरिएको छ साथसाथै सुखदायक रंगले डिजाइनरको रिसोर्ट लगाउँदछ जीवनमा काल्पनिक पोशाक। सजिलो र ब्रीजी सिल्हूटहरूमा आरामदायक काफ्तान, स्लोचि प्यान्ट्स, स्ट्रिप्पी मैक्सिस र शो स्टिलिंग साड़ीबाट सबै थोक समावेश थिए। गहन सज्जनहरू, Tassel र फ्रिन्जहरू जस्ता विवरणहरूले यस दृश्यलाई थप रमाईलो र विचित्र बनायो। संग्रह एक गर्मी प्याराडाईज थियो जुन यलोबाट हिर्काउनेदेखि लिएर फ्लेमिंग रेडहरू र सूर्य र समुद्रबाट प्रेरित ब्लूजको रंगका साथ जीवन्त छायाँले भरिएको थियो।
पारस र शालिनी द्वारा गीशा डिजाइन
स्थायी रूपमा अनावश्यक कपाल हटाउन घरेलु उपचार
विषयवस्तुलाई 'मीठो सम्झनाहरू' दिइएपछि पारस र शालिनीले आफ्नो सनकी, काल्पनिक संग्रह प्रदर्शन गरे जुन टाढाबाट अत्यन्तै असाधारण देखिन्थ्यो। पुरानो हवेलीमा सेट गर्नुहोस्, भर्या। र ड्रापदेखि लिएर रूफ जर्नलहरू र फिसर्ड पेनसम्म सबैले विन्टेज वीब दिए जुन मोडेलहरूले समग्र सेटिंगमा नाटक र भव्यता थप्यो। विविध सिल्हूटहरू र कपडाहरू रोमान्टिक र ग्लैमरस शैलीहरू फ्रिल्स, टकहरू र रमाईलोहरूले भरिएका थिए। एक सबै को कपडा मा विवरण को विस्तृत श्रृंखला देख्न सक्दछ, अस्थायी सपना जस्तो भावना शोकेस मा स्पष्ट छ।
पंकज र निधि
यसलाई ठाडो र कुरकुरा राख्नका लागि परिचित, पंकज र निधिले फेशन वीकमा आफ्ना नयाँ संग्रहलाई कालिदो (जुन एक ग्रीक शब्द हो जसको अर्थ सुन्दर रूप हो) द्वारा प्रेरित गरिएको थियो। तीन आयामिक ज्यामितीय सौंदर्य केहि ताजा र नयाँ थियो जुन यी युवा डिजाइनरहरूले टेबलमा ल्याए। ज्यामेट्रिक प्रिन्ट गरिएको सिल्हूट्सदेखि जैकेटसम्म सिक्किन्स भरिएको, र हामी यसको साथ ल्याइएको जीवन्तता र रमाईलो अनुभव गर्न सक्दछौं। स्ग्रहले उज्यालो रातो, बिजुली साग र पिन्कहरूबाट निलोको अल्ट्रा वायोलेट शेडहरूमा इन्द्रेणी रंगको फस्ट देख्यो। निःशुल्क बगिरहेको मेकअप र ट्रेंडसेटिset सजीलो, ब्रीजी र स्पोर्टी सिल्हूट्सको साथ मिलकर समग्र दर्शन संग्रहमा ठाठ कारक थप्यो। हामीलाई नयाँ वर्षको लागि आवश्यक आशा र आनन्द दिँदै, डिजाइनरहरूले हामीलाई अगाडिको अभूतपूर्व वर्षको लागि एक आशावादी हेराई दिए।
शान्तानु र निखिल द्वारा एस एन्ड एन
शान्तानु र निखिल द्वारा क्युरेट गरिएको एस एण्ड एन पुन: परिभाषित उत्सव पोशाकमा आधारित छ यसमा समावेश सफारी शैलीको संकेतको साथ। यसमा सहस्राब्दी स्पनको साथ, सिल्हूटहरू र समग्र vibe न्यूनतम थियो र अफ-बीट विवरण र समकालीन शैलीहरूको साथ ठाठ। पृष्ठभूमिमा उच्च-टेक भिजुअलहरूसँग विवादास्पद गोरा, कालो, खैरो रंग एकदम टेक-प्रेमी देखिन्थ्यो तर एकै साथ आउटफिटबाट कुनै ध्यान खिचेन। सबै उमेर-कूल मिलेनियलहरूका लागि आकर्षण, संग्रहमा कूल टी-शर्टहरू, स्नीकर्स र सर्टहरू डिजाइनरहरूको हस्ताक्षर प्रिन्टहरू र दर्शकहरूलाई बार्षिक विकल्पहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दै समावेश गर्दछ। उत्सवको धारणाबाट प्रेरणासहित संग्रह दिनको धमाकाको साथ अन्त गर्ने उत्तम तरिका थियो!
यो पनि पढ्नुहोस्: अनामिका खन्ना लेक्मे फेशन वीक एक्स एफडीसीआई खोल्छिन्
द्रुत कपाल विकासको लागि सुझावहरू
हामी किन ग्लूकोजबाट तत्काल उर्जा प्राप्त गर्छौं
कपाल झर्नु र विकासको लागि उपचार
सुन्दर अनुहारको लागि घरमा सौन्दर्य सल्लाहहरू
कपाल झर्ने कारण र समाधान